Kooxaha PSG, Man United iyo Real Madrid oo war wanaagsan kaga imaanayo xiisahooda kaga aadan Paulo Dybala – Gool FM
Kooxaha PSG, Man United iyo Real Madrid oo war wanaagsan kaga imaanayo xiisahooda kaga aadan Paulo Dybala
Dajiye September 23, 2018
(Serie A) 23 Sab 2018. Paulo Dybala ayaa si weyn kaga soo hor jeeda inuu kusii jiro kursiga keydka kooxda reer Talyaani ee Juventus, wuxuuna doonayaa inuu u dhaqaaqo Manchester United si uu kaga baxo xabsiga Massimiliano Allegri.
Waxay u muuqataa in mustaqbalka Paulo Dybala ee kooxda Juventus uu shaki weyn ku jiro, kadib markii uu si toos ah kaga baxay qorshaha macalinka reer Talyaani ee Massimiliano Allegri xili ciyaareedkan.
Wargeysyada Talyaaniga ayaa soo wariyay in Juventus aysan waxba ka qabi doonin hadii uu kooxda ka dhaqaaqo Paulo Dybala, suuqa kala iibsiga ee soo aadan, laakiin waa hadii ay ku helayaan qiimo macquul ah.
Shabakada Mediaset ayaa shaacisay in Juventus aysan ku fasixi doonin Dybala qiimo ka yar 120 milyan euro, halka ay wararku sheegeen in kooxda reer Talyaani ay si dhaqsi ah ugu ogolaaneyso laacibka reer Argantina kooxda kasoo guudbisa 140 milyan euro in si uu ugu dhaqaaqo.
Hadalkan ayaa wuxuu war wanaagsan u noqon doonaa kooxaha waaweyn ee qaarada yurub sida Paris St Germain, Manchester United iyo Real Madrid oo dhamaantood wada xiiseenaya adeega ciyaaryahankan.
Arsenal oo guul muhiim ah kaga gaartay Emirates Stadium kooxda Everton, xili Lacazette iyo Aubameyang ay shabaqa wada gaareen
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Frosinone vs Juventus ee horyaalka Talyaaniga